Ao Afghanistan, lanin’ny ady ny fahazazana · Global Voices teny Malagasy
Zatovo 3500 no namoy ny ainy tamin'ny ady Afghan tao anatin'ny telo taona
Voadika ny 15 Novambra 2019 15:18 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Italiano, 繁體中文, Español, Ελληνικά, русский, Nederlands, English
Mahatsiaro ny zanany lahy tanora, Saleh Mohammad, izay maty nandritra ny vivery ny ainy iray i Mohammad Hazrati. Saripikan'i Ezzatullah Mehrdad, nahazoana alalana
Nilalao araka ny mahazatra teo an-tokotanin'ny fianakaviany tao Kabul i Saleh Mohammad ny takarivan'ny Aogositra raha nitsambikina teo amin'ny bolongan-kazo, nandratra azy teo amin'ny tongony ary nahalasa ny hohon-tongony iray. Saingy tsy nampihemotra azy tsy hanatrika ny iray amin'ny fotoan-dehiben'ny fianakaviany izany izay teo am-pikarakarana ny mariazin'ny anabaviny tamin'io andro io ihany.
Teo am-panaovana ny hirany ny mpitendry hira, nipetraka teo akaikin'ireo i Saleh ary nankafy ny fety. Saingy fohy ihany ny fotoana nifaliany: nahitana mpanao vivery ny ainy milaza ny fanoavany ny Fanjakana Islamika nanapoaka baomba tao anatin'ireo vahiny maro nasaina. Izay no namarana ilay fety, sy ny fiainan'i Saleh. Telo ambin'ny folo taona izy tamin'izany fotoana izany.
Raha teo am-panesorana ireo vatana am-polony an'ireo vahin'ny lanonana i Ghulam Mohammad Hazrati, ilayraim-pianakaviana, dia tsynahita ny zanany lahy mihitsy izy. Nikaroka tany amin'ireo hopitaly akaiky izy fa rera-poana. Avy eo izy nahatsikaritra vatana rovidrovitra teo an-tokotany, araka ny nohazavainy: “Nahafantara ny vatany izahay tamin'ny alalan'ilay hohon-tongotra niala.”
92 no maty tamin'ity fanafihana ity, ka ao anatin'izany ny tanora sy ny kilonga mpianatra tahaka an'i Saleh.
Raha hita fa latsaky ny 15 taona ny efa ho atsasaky ny mponina ao Afghanistan, ny ankizy no tena iharan'ny ady misy amin'izao fotoana: efa tsy hita isa intsony ireo Afghans matin'ny vivery ny ainy na fiara misesika baomba, tantelimby (drones), fandarohana amin'ny alina, ady an-tanety mieli-patrana.
Nandrakitra “fanosihosena goavana” mihatra amin'ny ankizy tao anatin'ny efa-taona tamin'ny ady Afghan miisa 14.000 ny firenena mikambana. Tanora efa ho 3500 no very nandritra ny ady nanomboka tamin'ny taona 2015 ka hatramin'ny taona 2018 ary mihoatra ny 9000 no naratra. Ireo vondrona mpioko mitam-piadiana no tompon'andraikitra 43 isanjato tamin'ny fahavoazan'ny ankizy, raha ny hery pro-governemanta kosa no tompon'andraikitra tamin'ny 30iosanjaton'ny fahavoazana, araka ny tatitry ny Firenena Mikambana.
Ho an'ireo sisa miangana amin'ny fanafihana, mirakitra amin'ny andro sisa iainan-dry zareo matetika ny ratrantsaina mahazo azy ireo avy amin'izany. Nilaza ny fikambanana tsy mitady tombombarotra Save the Children (Vonjeo ny ankizy) tamin'ity taona ity fa heverina ho 20 tapitrisa ny isan'ny ankizy mifoha isan'andro ao anatin'ny tahotra fandrao misy fipoahana na fifampitifirana amin'ny basy.
Tanora 14 taona niangana tamin'ny fanapoahana baomba voasesika baomba nataon'ny Taliban tao Kabul nitranga tamin'ny fiandohan'ny volana septambra i Kamaludin. Mahatsiahy izy: “Tsy maintsy natory aloha aho satria tsy maintsy mandeha maraina ho any an-tsekoly. Ny fanafihana no nanaitra ahy.” Voatery nosokirina tamin'ny tranony roa rihana izay nirodana tanteraka ny iray tampo taminy.
“Ny olana voalohany dia ny tsy fankatoavantsika ny fiainan'ny ankizyny ratrantsaina sy ny fahakiviana noho ry zareo mora iharan'ny herisetra,” hoy i Freshta Karim, mpanorina sy talen'ny Charmaghz, fiara mpitatitra tranomboky mpivezivezy ho an'ny ankizy ao Kabul. “Ireo izay tratra voalohany niaina fikorontanantsaina taorian'ny rarintsaina.”
Fanafihana roa vao haingana no mampiseho ny fahavoazana ara-pihetsehampo ateraky ny ady amin'ny ankizy. Tamin'ny fanapoahana fiara voasesika baomba tamin'ny jolay, voadaroky ny Taliban maraimbe ny fanorenana ara-miaramila Afghan iray ary mifanandrify amin'ny fotoam-pianarana tao Kabul izany. Farafahakeliny mpianatra an-tsekoly 26 no naratra. Tamin'ny fiara voasesika baomba iray hafa, nokendren'ny Taliban ny birao iray sampan'ny fitsikilovana Afghan akaikin'ny sekoly tsy miankina iray tao Ghazni, ao afovoan'i Afghanistan. Nahafaty kilonga iray sy nandratra 60 hafa izany fanafihana izany.
Potiky ny fiara iray voasesika baomba ny kilasy tsy miankina iray ao Ghazni. Sary hita tao amin'ny media sosialy.
Nikatona nandritra ny andro vitsy ireo sekoly akaikin'izany toerana nisiana fipoahana baomba izany. Rehefa nitohy indray ny fampianarana, efitra fianarana ravan'ny fipoahana baomba no nidiran'ny mpianatra. Mbola ratsiratsy kokoa noho izany no mitranga any amin'ny faritra ambanivohitra: Ataon'ny Taliban sy ny herim-piarovana Afghan ho toby matetika ny trano sekoly ary ankavitsiana no ialàny amin'ireny toerana ireny.
Ny fiitaran'ny ady an-tanety no antony voalohany mampikatona ny sekoly. Nitombo avo telo heny ny fanafihana mahazo ny sekoly Afghan tanelanelan'ny taona 2017 sy ny taona 2018, araka ny UNICEF.
Tamin'ny May 2019, nilaza ny sampandraharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny ankizy fa nitarika fikatonan'ny sekoly 1000 ny ady mandra-pahatapitry ny taona 2018, ary lasa tsy tafiditra an-tsekoly ny ankizy Afghan tombanana ho 3,7 tapitrisa anelanelan'ny taona 7 ka hatramin'ny 17—efa ho ny atsasaky ny ankizy ao amin'ny firenena izany—.
“Izany no fanimbana ratsy indrindra atao amin'ny zanaky ny firenena,” hoy i Karim. “Nesorina tamin-dry zareo ny hirika hampivelarana ny talentan-dry zareo. Ny ady no mampisoroka azy ireo tsy hampivelatra ny mety ho zavatra vitany. Tsy manam-bintana ny hisandratra ireo ho siantifika rahatrizay.”
“Nanaisotra azy ireo ny habaka ahafahany mitombo [ao anatin'ny tontolo mahasalama] ny ady Afghan,” hoy ny nampian'i Karim. “Tsy afa-mampivelatra fisainana mahay mamkafaka ry zareo, ka mahatonga azy ireo ho marefo ka hararaotin'ireo vondrona mahery fihetsika, ao anatin'izany ny Taliban sy ny ISIS.”
Mety handrehitra ny afon'adin'ny taranaka manaraka ao amin'ny firenena ny taranaka iray nahazo fanabeazana rahatrizay, eny fa na mety hisy aza ny fifanarahana amin'ny vondrona Taliban, nisian'ny fandriampahalemana maharitraritra nandritra ny taona maro saingy tsy dia nahitam-bokany loatra. Saingy ho an'ny ankizy tahaka an'i Saleh Mohammad, kilasy fahaenina, nanaisotra ny ainy mialoha ny nahitany ny vokatry ny fanadinana atsasa-taona asara ny ady.
Mialoha indrindra ny mariazin'ny anabaviny, nahavita fanadinana i Saleh Mohammad ary vao nisitraka ny fialan-tsasatra asara an-tsekoly izy. Rehefa nisokatra indray ny sekoly dia nandray ny voka-panadinana i Hazrati rainy ary nizara ny fihetseham-pony: “Tena mahay i Mohammad any an-tsekoly. Nanantena aho fa hahazo diplaoma avy amin'ny lisea izy, hianatra lalàna any amin'ny oniversite, hahazo asa, ary hanangana ny hoavy.”